Escherichia coli O157: H7 (E.coli O157: H7) bụ nje na-adịghị na gram na-adịghị mma nke ụdị Genero Enterobacteriaceae, nke na-ewepụta oke nke toxin Vero.
Norovirus (GⅠ) Ihe Nchọpụta RT-PCR
Okwesiri maka nchoputa nke Norovirus (GⅠ) na azu, azu, nkpuru osisi na nkpuru osisi, mmiri, nsonu, vupi na nkpuru ndi ozo. Ekwesịrị ịmịpụta Nucleic acid site na mwepụ nucleic acid ma ọ bụ usoro pyrolysis kpọmkwem dịka ụdị ụdị dị iche iche si dị.
COVID-19 / Flu-A / Flu-B Multiplex RT-PCR kit nchọpụta (Lyophilized)
New Coronavirus (COVID-19) na - agbasa n’ụwa niile. Ihe mgbaàmà ahụike nke COVID-19 na ọrịa nje influenza yiri.
COVID-19 mmụgharị Multiplex RT-PCR nchọpụta nchọpụta (Lyophilized)
New Coronavirus (COVID-19) bụ RNA Virus na-atọkarị agbụ nwere mmụgharị ọtụtụ ugboro. Isi nsogbu mgbanwe dị na ụwa bụ British B.1.1.7 na South African 501Y.V2 dị iche iche.
Akwụkwọ akụkọ Coronavirus (2019-nCoV) Ihe Nchọpụta RT-PCR (Lyophilized)
Akwụkwọ akụkọ Coronavirus (COVID-19) bụ nke genus coronavirus ma ọ bụ ezigbo nje RNA virus nwere dayameta nke ihe dịka 80-120nm. COVID-19 bụ ọrịa na-efe efe nke na-efe efe nke ukwuu. Ndị mmadụ na-enwekarị mmetụta nke COVID-19.
Listeria monocytogenes PCR Nchọpụta Kit
Listeria monocytogenes bụ gram-ziri ezi microbacterium nke nwere ike itolite n’agbata 4 ℃ na 45 ℃. O bu otu n’ime ihe n’enye oria ojoo n’enye mmadu nsogbu n’eri nri.
Norovirus (GⅡ) Ihe Nchọpụta RT-PCR
Okwesiri maka nchoputa nke Norovirus (GⅡ) na azu, azu, nkpuru osisi na nkpuru osisi, mmiri, nsonu, vupi na nkpuru ndi ozo.
Ihe Nchọpụta Salmonella PCR
Salmonella bụ nke Enterobacteriaceae na Gram-negative enterobacteria. Salmonella bụ ọrịa na-esikarị na nri na-ebute ọrịa nsị.
Shigella Ihe Nchọpụta PCR
Shigella bụ ụdị gram-negative brevis bacilli, nke sitere na nje nke eriri afọ, na ọrịa kachasị njọ nke ọnyụnyụ ọbara bacillary mmadụ.
Staphylococcus aureus PCR nchọpụta Kit
Staphylococcus aureus bụ nke genus Staphylococcus na ọ bụ gram-positive bacteria. Ọ bụ microorganism a na-ahụkarị maka nri nke nwere ike ịmepụta enterotoxins ma bute nsị nri.
Ihe nchọpụta PCR nchọpụta pharaemolyticus
Vibrio Parahemolyticus (nke a makwaara dị ka Halophile Vibrio Parahemolyticus) bụ gram-polymorphic bacillus ma ọ bụ Vibrio Parahemolyticus na nnukwu mbido, afọ mgbu, afọ ọsịsa, afọ ọsịsa na mmiri mmiri dị ka isi ihe mgbaàmà.